Ukubaleka kwezothando ku-Alacati, eTurkey | Iindaba Zokuhamba
Ukubaleka kwezothando ku-Alacati, eTurkey
Unxweme lwaseTurkey yindawo entle yokuya eholideyini okanye ukonwaba impelaveki ende. Unxweme lweAegean okanye iBosphorus lusatshisa kakhulu ngo-Okthobha ke ukuba awunako ukuhamba embindini wexesha le ndawo isekhona.
Unxweme lwaseTurkey inomoya wesiGrike kwaye ii-coves zayo zifihla iidolophana zamaphupha kunye neehotele ze-boutique. IsiAlacati ngomnye wabo, a ilali entle ngaselwandle ukuba ungongeza kuluhlu lwakho lweendawo zokubaleka zothando okanye ikhefu lokuwa.
2 Ufika njani eAlacati
3 Uhlala phi eAlacati
4 Izinto zokwenza eAlacati
Yilali engaselunxwemeni leyo ukwiphondo le-Izmir laseTurkey, kunxweme olusentshona nase-Aegean. Yayisungulwa kwi-1850 xa abasebenzi base-Ottoman Greek baziswa bevela kwiziqithi ukuzokucoca umhlaba we-malaria. Nje ukuba esi sifo sinyamalale, abantu bagqiba kwelokuba bahlale kwaye baqale idolophu kunye nobomi obutsha, basebenzise ilanga, umhlaba ochumileyo kunye nemimoya enamandla, baqala ukukhula.
Yiyo loo nto, kangangekhulu elinesiqingatha izidiliya zayo, uyilo lwakudala kunye nokusila kwazo bekutsala iindwendwe. Baye bajoyinwa kule minyaka idlulileyo ngabo basebenzisa ikitesurfing okanye ukubetha komoya, ngenxa yokuqina komoya. Ziikhilomitha ezingama-72 ukusuka kwisixeko saseIzmir uqobo, ngasekupheleni kwepeninsula yaseCesme, kwaye inoyilo olunomtsalane lwezindlu zamatye kunye nezitalato ezimxinwa namhlanje ezigcwele iivenkile, iivenkile zokutyela neehotele ze-boutique. Le lali iye yathandwa kangangokuba kukho malunga neendawo zokuhlala ezingama-80 zolu hlobo, kuquka iihostele neehotele.
Phakathi kwinkulungwane yamashumi amabini umanduleli we-UN, uManyano lweZizwe, wayalela ukutshintshiselana ngabantu emva kweMfazwe yesiBini yamaTurkey amaSilamsi asuka kwiiBalkan aziswa elalini kwaye amaGrike abuyiselwa kumakhaya awo eGrisi. Idolophana yahlala ilityelwe ngexesha iminyaka emininzi kwaye ke igcinwe iphelele kwaye intle. Namhlanje kukhenketho kakhulu kwaye yiyo loo nto, ukuba ubaleka ehlotyeni, ekwindla iba yindawo ezolileyo yokundwendwela.
Ufika njani eAlacati
Sithe ilali yimizuzu engama-45 ukusuka eIzmir, malunga nemizuzu engama-45 ukuqhuba ukusuka eIstanbul. Ungahamba ngenqwelomoya ngokuthe ngqo uye eIzmir unyaka wonke kwikomkhulu laseTurkey ngeerhafu ukusuka kwi-37 euro. Kukho iinqwelomoya ngokuthe ngqo ezivela kwezinye izixeko zaseYurophu.
Kukho iiteksi ezivela kwisikhululo senqwelomoya i-Izmir ukuya eAlacati malunga nee-euro ezingama-16 kwaye kukwakhona nenkonzo yebhasi yeshutile yeHavas.
Uhlala phi eAlacati
Kukho iindidi zeehotele kunye namaxabiso. Phakathi kweehotele ezibiza kakhulu, umzekelo, iManastir, ihotele ethengisa izinto ezakhiwe njengecawa, eneengcango zomthi nefenitshala emhlophe. Inika amagumbi ali-18 akumbindi wephuli yeemitha ezingama-25 kwaye iirhafu zivela kwiiras ezingama-450 zaseTurkey (i-137 euros), igumbi eliqhelekileyo, i-550 (i-167 euros) i-suit kunye ne-800 (243 euros), i-Deluxe Suit. Amaxabiso ngawama-Okthobha. Ibandakanya iirhafu, minibar kunye nesidlo sakusasa.
Kwakhona kukho iihotele zosapho ilunge kakhulu, umzekelo, ihotele 1850, esebenza kwisakhiwo esinomtsalane senkulungwane ye-20, ibuyisiwe yaza yaphuculwa. Amaxabiso atshiphu kuneyokuqala kwaye aquka isidlo sakusasa kunye neerhafu (phakathi kwama-30 ukuya kuma-XNUMX eeuros). Zininzi iihotele kwaye ezinye zilungile kwaye zinamaxabiso amahle ke ukuba uthatha isigqibo ngeAlacati kuloo ntsimi kuya kufuneka wenze uphando olucokisekileyo ukuze ufumane elona xabiso liphezulu.
Izinto zokwenza eAlacati
Ewe, ukwahluka kunye nobungakanani beehotele ezilalini kuqinisekisa amaxesha okuphumla. Banedama, banomtsalane, ezinye zakhiwe kwiindawo eziphakamileyo kwaye yonke into intle. Abantu bakhetha ukuchitha ixesha labo lasemva kwemini kwi Unxweme lolwandle, olunentlabathi emhlophe, luhlanjwe ngekristali kunye namanzi aluhlaza.
Zininzi iilwandle ezintle kwaye usenokubalekela kwinkwenkwezi yebhola ekhatywayo efike ngexesha lonyaka ukuba ubaleke kubantu abadumileyo abafoti. Inkqubo ye- Ulwandle olonwabisayoUmzekelo, mkhulu kwaye mkhulu: amanzi angenanto kunye nolwandle oluthambileyo, unokuqasha ibhedi yelanga kunye nesambrela, iphenyane elincinci lokuhamba okanye izixhobo zomoya. Kodwa zininzi kakhulu. Inkqubo ye- Kum elunxwemeni Ngenye yezona ndawo zisondeleyo kwidolophana kwaye enye yezona zinto zisondeleyo. Inkqubo ye- Ulwandle lweIlica IneBlue Flag kunye nelinye lawona manzi aziwa kakhulu kwaye ashushu. Kukho i- Ulwandle lwaseMarrakesh.
Ekwindla, ukuba ufuna ukuthatha ithuba lokuba akushushu ngendlela eyoyikisayo ngoJulayi okanye ngo-Agasti, ungaqhuba uqhube yazini izidiliya yeyimizuzu eyi-15 kuphela ukusuka. ICesme Bagcilik's intle kwaye inenqaba yokujonga ekunika umbono omnandi ngelixa ungcamla iwayini. Ukuqhubeka nokuhamba kwegastronomic ekwindla, i UMthendeleko weeVumba Ngeendlela zokupheka kunye nezithethe zokupheka ezivela kwiAegean, imiboniso, ukungcamla kunye neeworkshops.
Malunga nohambo olukujikelezileyo ungabhalisela ukhenketho kwaye wazi ubudala Amabhodlo esixeko sasePergamo, iLifa leMveli leHlabathi, neholo yemidlalo yeqonga yamaGrike eyakhiwe kwinduli esusela kwinkulungwane yesi-XNUMX BC Okanye nangasemva Izmir, sisixeko esinomtsalane waso: Yali Mosque, 1901 Clock Tower, Museum of Art Modern, ipaki yayo yezilwanyana zasendle okanye umyezo wezilwanyana.
I-Efese Ngenye indawo ekuyiwa kuyo kakhulu, phantse imbangi efanelekileyo ePompeii. Isixeko samaGrike sivela kwinkulungwane ye-25 BC, yayingeyaseRoma emva koko yayiyi-Byzantine ke kukho iinkulungwane zembali phakathi kwala matye. Isango lika-Augustus kunye neThala leencwadi laseCelsus lihle kwaye iGreat Amphitheatre enomthamo wabantu abangamawaka angama-XNUMX iyachukumisa.
Ngamafutshane, unxweme lwaseTurkey lufihla le mimangaliso kunye nezinye ezininzi. Uncedo lokundwendwela iAlacati ekwindla kukuba amaxabiso ayehla, ubushushu buyehla kunye nenani labakhenkethi liyehla.. Iihotele zihle, izitrato zazo ezenziwe ngamatye zihonjiswe ngeefestile kunye neeresityu kunye nomhlaba wazo zigcina ubuhle bazo kwangoNovemba. Ngaba uzishiyile iiholide kwindawo yokuhlala? Ewe, iAlacati inokuba sisisombululo ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Indawo yokubaleka » Ezothando » Ukubaleka kwezothando ku-Alacati, eTurkey
Izinto zokundwendwela eMarrakech
Islas de la Bahía, iparadesi yaseHonduran kwiCaribbean